“ယူတတ်လျှင် အတုယူစရာ စင်္ကာပူနိုင်ငံ” - News @ M-Media
in ဆောင်းပါး — September 27, 2017
အရှေ့တောင်အာရှတွင် စည်းကမ်းအရှိဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုအနေဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူသိအများ ဆုံးသော နိုင်ငံလေးတစ်ခုမှာ ရန်ကုန်မြို့ထက်ပင်သေးသော စင်္ကာပူကျွန်းနိုင်ငံလေးတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါ သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံမှ ခွဲထွက်ခဲ့သော နိုင်ငံငယ်လေးဖြစ်သည်။မြေပေါ်၊မြေအောက်၊ရေပေါ်၊ရေ အောက်တွင်းထွက်သံယံဇာတများ၊ မထွက်ရှိသဖြင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များကို အမှီသဟဲပြု အားကိုးပြီး အာဆီယံ (၁၁)နိုင်ငံထဲတွင် နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများ သွားရည်ကျရသည့် နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ၅,၇၈၀,၀၀၀ ဦးကျော်နေထိုင်ကြသည်။
စင်္ကာပူတွင် ဝန်ကြီးချုပ်သည် အာဏာအရှိဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ သမ္မတတွင်မူ ပြည်သူပိုင်ကဏ္ဍတွင် ရာထူးခန့်အပ်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်ခြင်း၊အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကို စစ်ဆေးနိုင် ခြင်းနှင့် ဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန့်အပ်ခြင်းအပါအဝင် အရေးပါသော တာဝန်ဝတ္တရားများလည်းရှိပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စင်္ကာပူပါလီမန်က “နိုင်ငံ၏လူမျိုးနွယ်အုပ်စုများဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယမျိုးနွယ်၊ တရုတ်မျိုးနွယ်၊မလေးမျိုးနွယ် စသည့်တို့ထဲမှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည် နှစ် ၃၀ကြာ သို့မဟုတ် ၅ကြိမ်ဆက်တိုက် သက်တမ်းများအတွင်း တစ်ကြိမ်မျှ သမ္မတမဖြစ်ဖူးလျှင် သမ္မတရာထူးကို ထိုလူမျိုးနွယ်အုပ်စုထဲမှ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ရမည်” ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေသည်။
သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်ခံလိုသူများသည် စင်္ကာပူသမ္မတ ရွေးချယ်ရေးကော်မတီသို့ အမည်စာရင်းတင်သွင်းရသည်။ သမ္မတရွေးချယ်ခန့်အပ်ရေးဇကာတင်၊ သံမဏိစည်းမျဉ်းအချို့နှင့် ညှိစွန်းမှု့ကြောင့် သမ္မတလောင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူများ ပလပ်ခံခဲ့ရသည်။ သမ္မတ ရွေးကောက်ရေး သံမဏိစည်းမျဉ်းများမှာ အများပြည်သူဆိုင်ရာ ထိပ်တန်းရာထူးတာဝန်ထမ်း ဆောင်ဖူးခြင်းရှိ၊ မရှိ (သို့မဟုတ်) သတ်မှတ်ရှယ်ယာအရေအတွက်ရှိ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို စီမံခန့်ခွဲဖူးခြင်းရှိ၊ မရှိစသည်တို့ကို မှတ်ကျောက်တင်၊ ရွေးချယ်လိုက်သောအခါ မလေးနွယ်ဖွား အသက် ၆၃ နှစ်ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးဟလီမာဘင်ယာကွတ် တစ်ဦးကိုသာလျှင် သမ္မတလောင်းအဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ခွင့်ပြုချက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ ၈ဦးမြောက် အမျိုးသမီးသမ္မတ တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပေသည်။ ရွေးကောက်ပွဲမရှိဘဲ ပြိုင်ဖက်ကင်းစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး သမ္မတဖြစ်လာသောကြောင့် စင်္ကာပူသမိုင်းတွင်ထူးကဲလှပေသည်။ စင်္ကာပူတက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေပညာရပ်ဖြင့် ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး မွေးချင်း၅ဦးအနက် အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံရေးလောကသို့ဝင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုတွင် ပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကို ထမမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်သည်။
သမ္မတသစ်က “သမ္မတရဲ့အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှာ ညီညွတ်ရေးကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ရ မှာဖြစ်ပြီး ကျမ အရေးကြီးဆုံးပြောချင်တာကတော့ စင်င်္ကာပူနိုင်ငံသားတွေ ကျမနှင့်အတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ပါ” ဟု စင်္ကာပူအခြေစိုက်ရုပ်သံ Channel News Asia သို့ပြောကြားခဲ့ပေသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံသမိုင်းတွင် ပထမဦးဆုံး အမျိုးသမီးသမ္မတဖြစ်လာသူ ဟလီမာယာကွတ်သည် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အိန္ဒိယ-မလေးနွယ်ဝင်ဖြစ်ပါသည်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံပြည်သူလူထု အကျိုးကို မိမိအနေနဲ့ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်း ကတိပေးခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၅ခုမှ ၁၉၇၀ ခုထိ ပထမဆုံး သမ္မတ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် Yusof Ishak သည်လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့လေ သည်။
၁၉၆၅ခု သြဂုတ်လ ၉ရက်နေ့မှစ၍ လွတ်လပ်သောနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သောစင်္ကာပူနိုင်ငံ ၏သမ္မတများမှာ
(၁) Yusof Ishak (၁၉၆၅-၁၉၇၀)
(၂) Benjamin Sheares (၁၉၇၁- ၁၉၈၁)
(၃) Devan Nair (၁၉၈၁- ၁၉၈၅)
(၄) Wee Kim Wee (၁၉၈၅- ၁၉၉၃)
(၅) Ong Teng Cheong (၁၉၉၃- ၁၉၉၉)
(၆) S.R Nathan (၁၉၉၉- ၂၀၁၁)
(၇) Tony- Tan (၂၀၁၁-၂၀၁၇) နှင့် ရွေးကောက်ပွဲမရှိဘဲ၊ ပြိုင်ဘက်မရှိဘဲ၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ရက်နေ့တွင် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပြီး သမ္မတဖြစ်လာသော ဦးခေါင်းတွင် ဟီဂျပ်ပဝါခြုံလေ့ရှိသူ ဟလီမာယာကွတ်ပင်ဖြစ်သည်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံသမ္မတ၏ နှစ်စဉ်ပျှမ်းမျှလစာမှာ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၄သန်း ဖြစ်သည်။ စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ်၏တစ်နှစ်တာ ပျှမ်းမျှလစာမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၂ဒသမ ၂သန်း ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မတ၏လစာသည် စင်္ကာပူနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းခေါင်းဆောင်များတွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး လီကွမ်ယူသည် ၁၉၅၉ခုနှစ်မှ ၁၉၉၀ခုနှစ်ထိ ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ နအဖစစ်အစိုးရ လက်ထက် မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့စဉ် စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ်က “မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တွေနဲ့စကားပြောရတာ လူသေတွေကို စကားပြောနေရသလိုမျိုး ခံစားရတယ်”ဟု ဝေဖန်ပြောဆိုချက်သည် မြန်မာပြည်သူ လူထုကြား ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ လီကွမ်ယူ အနားယူပြီးနောက် ဒုတိယကြိမ်မြောက်ဝန်ကြီးချုပ် ဂိုချောက်ထောင်သည် ၂၈ ရက်နိုဝင်ဘာလ ၁၉၉၀မှ ၁၂ရက် သြဂုတ်လ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ထိ တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ပထမဆုံး ဝန်ကြီးချုပ်လီကွမ်ယူ၏ သားအကြီးဆုံးဖြစ်သူ Lee Hsein Loong သည် သြဂုတ်လ ၁၂ရက် ၂၀၀၄မှ ယနေ့တိုင် စင်္ကာပူ နိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ် အဖြစ် တာဝန်ယူနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူရင်ထဲ အသဲထဲစွဲမှတ်မိနေသော ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း လီကွမ်ယူ၏စကားလေး တစ်ခုဝေမျှလိုပါသည်။ “ယခုအခါ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းတွေနဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကို တက်သိမ်းစရာမလိုဘူး။ ပညာတတ်အောင်လုပ်ပါ။ သူ့ဟာသူ ကျွန်ခံလာလိမ့်မည်”ဟု ပြောဆိုလုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၂၃၀ကျော်မှာ မသိသူ၊မရှိ သည့် ကမ္ဘာကျော်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သွားခြင်းက ပညာအရင်းအမြစ်ကို အခြေခံခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် အမှန်တကယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိုပါက ဘာသာ၊လူမျိုးမခွဲခြားဘဲ အရည် အချင်းရှိသည့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့် တိုင်းပြည်အကျိုးသည်ပိုးလိုသည့် နိုင်ငံသားများကို သူနှင့် ထိုက်တန်သည့် နေရာတွင် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးဖို့လိုပါသည်။ အိမ်နီးချင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ တို့တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များ၊ သမ္မတနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ ပေါ်ထွန်းခဲ့ဖူးသည်။ ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်များ၊ ကမ္ဘာကျော်အားကစားသမားများ အစ္စလာမ်ဘာ သာဝင်များထဲမှ ပေါ်ထွန်းနေစဉ်တွင် စာရေးသူတို့ မြန်မာ့အားကစားလောကတွင် တာဝန်ရှိသူ လူကြီးဆိုသူများက ခေတ်အဆက်ဆက်ကျင့်သုံးခဲ့သည့်မူမှာ “ဖလားမပါရင်နေပါစေ၊ ကုလားမပါ ရင်ပြီးရော” ဆိုသည့် လူမျိုးစွဲ၊ ဘာသာစွဲ၊ မှိုင်းများအောက်မှ ရုန်းမထွက်နိုင်သော လူတန်းစားများကား ယနေ့တိုင် နေရာအနှံ့ ရှိနေပေသည်။
“တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေး” ဟု ကြားကောင်းအောင် ပြောဆိုနေသူများသည် ၁၉၆၂ခု မတ်လ ၂ ရက်နေ့ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ဦးဆောင်သော စစ်တပ်မှ ပြည်သူ့အစိုးရဆီမှ နိုင်ငံတော် အာဏာကို မတရားသိမ်းယူခဲ့ပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ သမ္မတရာထူး ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူး၊ ဝန်ကြီးရာထူး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် စသော ရာထူးများကို ဗမာလူမျိုးနွယ်ဝင် မဟုတ်သော အခြားတိုင်းရင်းသား များထဲမှ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့ခြင်းသည် ထင်ရှားသော သက်သေ သာဓက တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ဟု တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် DVB debate ဆွေးနွေးပွဲများတွင် တိုင်းရင်းသားများထဲမှ ရင်တွင်းဖြစ် ခံစားချက်အသံကို ကြားခဲ့ဖူးပါသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၁၅ခု နိုဝင်ဘာလ ၈ရက် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် NLD ပါတီထဲမှ နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံရှိ ဘွဲ့ရ၊ ပညာတတ် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ
မဖြစ်ရေး လွှတ်တော်ထဲမရောက်ရေးအတွက် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို ပစ်မှတ်ထားကာ နောက်ကွယ်က လက်မဲကြီးအုပ်စုက အယောင်ဆောင် မျိုးချစ်များ၊ ကြေးစားမျိုးချစ်များ၊ အခွင့်ထူးခံ များနှင့် ဗုဒ္ဓ၏ဝိနည်းတော်နှင့် မညီသည့် သင်္ကန်းဝတ်များကို မြှောက်ထိုးပင့်ကော် အဆိပ်မှိုင်းများ သွတ်သွင်းကာ ဘာသာရေးခုတုံးလုပ် နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ကာ ရှက်ဖွယ်လိလိ ကိစ္စများကို ပေါ်ပေါ်တင်တင် ပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့် NLD ပါတီထဲမှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၊ နိုင်ငံရေး အစဉ်အလာ ရှိသူများ၊ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းကို ကျောခိုင်းခဲ့ လေသည်။ “မြန်မာပြည်ကြီးကို ချစ်ပါသည်။ မြန်မာလူထုကို ချစ်ပါသည်။ ပြည်သူလူထုအတွက်ဆို အသက်ကိုပင်ပေးဆပ်ဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပါသည်။” ဟုပြောဆိုနေသော ဗမာလူမျိုး၊ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များကို မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော် ဘုရားကြီးက “တို့ရဟန်းမှာ လူမျိုးမရှိဘူး။ ဘာသာမရှိဘူး။ တိုင်းပြည်မရှိဘူး။ မရှိတဲ့အတွက် ငါ့လူမျိုးမှ၊ ငါ့လူမျိုး။ ငါ့ဘာသာမှ၊ ငါ့ဘာသာ။ ငါ့တိုင်းပြည်မှ၊ ငါ့တိုင်းပြည်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူး” ဟုလည်းကောင်း၊ သီတဂူဆရာတော်ကြီးကလည်း “လူတွေကို ကုလားလား? ဗမာလား? မွတ်စလင်မ်လား? ခရစ်ယာန်လား? ခွဲနေစရာမလိုဘူး။ လူဆိုးလား? လူကောင်းလား? ခွဲတတ်ရင်တော်ပြီ။ အဲဒါမှ ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ မြန်မာ့ဝါဒ” ဟူ၍ ဟောကြားခဲ့ဖူးပါသည်။
စာရေးသူ အနေဖြင့် အကြံပြုတင်ပြလိုသည်။ နိုင်ငံဦးသျှောင်တာဝန်ကို ယူထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ခေါင်းဆောင်ဆိုသူများ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ ရာဇဝင်သမိုင်း မရိုင်းဖို့ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်သိမှု အပြည့်အဝရှိဖို့တော့လိုသည်။ မျက်စိကိုမှိတ်၊ နားကိုပိတ်၍ မျက်မှန်စိမ်းတတ်ကာ “ငါ့လူမျိုး၊ ငါ့ဘာသာမှ၊ အခရာ” လုပ်နေလို့ကတော့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များ တံတွေးခွက်ထဲတွင် ပက်လက်မျှောသွားလိမ့်မည်။ “အမှန်တရားဘက်တော်သား” ဖြစ်ဖို့လိုသည်။ လူတော်လျှင်၊ စင်ပေါ် ခေါ်သည့်မူကျင့်သုံးပြီး အံ့မခန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ကြီးပွားနေသော နိုင်ငံမျိုးကို အတုယူစံနမူနာယူဖို့ လိုသည်။ ကျဉ်းမြောင်းသော လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး အစွန်းရောက်အတွေးအခေါ်များ၊ ခေါက်ရိုး ကျိုးနေသော ကြားကောင်းယုံ ဖြစ်သော အပေါ်ယံ သကာရည်လူးထားပြီး မြန်မာပြည်သူလူထု ကြီးအတွက် အာမခံချက်မရှိသော လုပ်ရပ်များကို ရပ်တံ့ဖို့ အချိန်တန်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အာဆီယံ ထိပ် တန်းဝင် ရှစ်ဦးမြောက် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီး သမ္မတသစ် ဟလီမာဘင်ယာကွတ်ကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သည့် စင်္ကာပူနိုင်ငံငယ်လေးကို အတုယူသင့်ပါကြောင်း လေးနက်စွာ တင်ပြလိုက်ပါသည်။